I-Gawthorne's Hut - UKUHLALA OKUnhle kakhulu OKUHLULE - Airbnb 2021 - I-Airbnb
I-Gawthorne's Hut - UKUHLALA OKUnhle kakhulu OKUHLULE - Airbnb 2021
Mudgee, New South Wales, i-Australia
Iqhugwane ibungazwe ngu-Rick And Steph
I-Gawthorne's Hut iwundlu kanokusho, umakhi oklanywe, ngaphandle kwegridi ye-Eco hut eyezithandani. Yintsha entsha yokuphunyuka kwezwe lika-Wilgowrah. Yakhelwe ukuthwebula ukubukwa okumangazayo ihlinzeka izivakashi ngokuthula, ubumfihlo kanye nomuzwa wokuhlukaniswa. Okufakiwe - I-King bed, ukugeza okugcwele, ishawa, indlu yangasese eshaywayo nekhishi. I-Gawthorne's Hut manje ine-air conditioning yesikhathi sasemini. I-"Wilgowrah" iyindawo yasemaphandleni enomlando nenhle eyaziwa ngokubaleka kwayo kokuqala - iTom's Cottage.
Indawo ifudumele futhi iyamema ngezingodo zemvelo ezisetshenziswa kakhulu kulo lonke. Amafasitela amakhulu nezicabha zithwebula imibono yesigodi esihle sase-Mudgee kanye nemvelo ezungezile. I-Gawthorne's iyindawo ekahle yokubalekela yothando.
5.0 · 164 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Rick And Steph
I-Gawthorne's Hut icishe ibe ngamakhilomitha ama-2 ukusuka ekhaya futhi itholakala ngemuva kwendawo ethi "Wilgowrah" enomnyango wayo wangasese ongase-Edgell Lane.Cishe ngeke usibone nhlobo ngaphandle uma ufuna ukubingelela kodwa sisuke sikufonele uma udinga usizo.
I-Gawthorne's Hut icishe ibe ngamakhilomitha ama-2 ukusuka ekhaya futhi itholakala ngemuva kwendawo ethi "Wilgowrah" enomnyango wayo wangasese ongase-Edgell Lane.Cishe ngeke usibon…
URick And Steph Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: PID-STRA-6327